जहाँ म जाने र पाउन चिनियाँ बालिका? यो प्रश्न अक्सर आउँछ त भनिन्छ चीन, वा नव आगन्तुक. वास्तवमा, उत्तर एकदम सरल छ । यो जस्तै छ आफ्नो देश मा, संग मात्र एक फरक छ । कि तपाईं आउन संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप वा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, यो जस्तै छ आफ्नो देश मा. सडकमा, बारहरू, किनमेल-मल, आफ्नो कार्यस्थल वा आफ्नो घर मा छ भने, तपाईं एक महिला चिनियाँ को पाठ्यक्रम. फरक छ । तपाईं चीन मा हो, र मनमा राख्न, यो देश अझै खुला संसारमा, त्यसैले भइरहेको एक विदेशीले यहाँ. सबै को पहिलो, तपाईं असामान्य छ । अब, तपाईं को बिचित्रको र रहस्यमय एक देखि आउँदै एक देश टाढा, टाढा । त्यसैले, अधिकांश समय तपाईं हुनेछ रोशनी मा, पनि जब तपाईं बस गर्न आफ्नो बाटो मा किन्न आफैलाई एक नाश्ता छ । तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ यो लेखमा लागि अधिक सुझाव: पूरा एशियाली महिला को सजिलो तरिका छ । हामी सुरु हुनेछ संग एक कुनै-बारहरू. बस मा रूपमा, लगभग हरेक अन्य देश को विभिन्न प्रकार छन् बारहरू. तपाईं जान भने गर्न एक विद्यार्थी पल्ट छन्, धेरै राम्रो संभावना तपाईं अन्त हुनेछ हस्तान्तरण खाली छ । विद्यार्थी बारहरू छ ठाँउ, लागि पैक. सबैजना त्यहाँ संग आउछ आफ्नो चालक, र तपाईं छैनन् भने एक भाग को विद्यार्थी जीवन मा भाग को शहर, समाप्त कि बियर र मा सार्न । सुरक्षित शर्त छ जान एक अनन्य बारहरू मा शहर । पनि, चिनियाँ ठूलो शहरी डम्प छ एक पल्ट को भनेर क्रमबद्ध. त्यसैले पनि भने, तपाईं फँस छन् लागि काम केही मा सानो शहर, तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ पाउन । त्यसपछि फेरि, मा फँस एक चिनियाँ गाउँमा.
जे भए पनि, अनन्य बारहरू छन् जहाँ अधिक परिपक्व, स्वतन्त्र चिनियाँ महिला भेला, र तिनीहरूले आउन त्यहाँ ठ्याक्कै लागि त्यही कारण रूपमा तपाईं: केही पाउन कम्पनी हो । मात्र छ कि यी ठाउँहरूमा धेरै महंगा हो. त्यसैले, लागि आफैलाई तयार पश्चिमी मूल्य भने, तपाईं किन्न चाहनुहुन्छ एक पेय लागि महिलाहरु.
यो सस्तो छ, र सम्भाव्यतालाई छन् लगभग अपार छ, तर त्यहाँ छन् धेरै. सबैभन्दा चिनियाँ बालिका जस्तै, चिनियाँ सामान्य मा, धेरै शर्म गर्न आउँदा यो सञ्चालन मा सार्वजनिक । त्यसैले, यदि एक महिला दृष्टिकोण तपाईं सडक मा, त्यो या त एक समर्थक वा एक केटी लागि काम गर्ने नजिकैको पट्टी छ । पनि छैन, महिला दृष्टिकोण मा, सडक आमन्त्रित गरिएको छ । सम्म प्रतीक्षा त्यो देखिन्छ मा, तपाईं वा. त्यो समय छ जब तपाईं संलग्न गर्नुपर्छ. क्लब मा चीन एक राम्रो ठाँउ एक प्राप्त गर्न एक-रात अडान छ । पनि, फैंसी क्लबहरू अघि, तपाईं संग संलग्न केही केटी, एक असल लिन हेर्न जसलाई त्यो संग छ । तपाईं गडबड गर्न चाहँदैनन् स्थानीय अधिकारीहरु’ वा स्थानीय»व्यवसायी गरेको»बालिका । चिनियाँ मान्छे हेर्न सक्छ धेरै, तर तिनीहरूले धेरै छिटो र छक्कै पर्छन् को पूर्ण झगडे, र तिनीहरूले सामान्यतया एक मदत । लोकप्रिय क्लब. तर यहाँ कुरा हो: क्लबहरू त्यहाँ छ अधिक मौका तपाईं संग अन्त हुनेछ एक विदेशी केटी भन्दा एक चिनियाँ एक । मात्र विदेशीले कम्पनी मा, तपाईं प्राप्त हुनेछ एक हरियो प्रकाश धेरै बालिका द्वारा आफ्नो कार्यालय छ । मात्र समस्या छ कि, चीन मा अधिकांश सहकर्मी हुनेछ छैन को अनुमोदन, आफ्नो सम्बन्ध र मालिकहरुलाई रुचि छैन, यो पनि विशेष गरी भने, तपाईं काम को लागि एक राज्य कम्पनी हो । त्यसैले, के. कुनै पनि छ कि, आफ्नो व्यवसाय को, तपाईं यसो भन्न सक्नुहुन्छ । खैर, तपाईं समस्या छैन हुनेछ, तर त्यो हुनेछ । त्यो प्राप्त हुन सक्छ, मा पारित कि पदोन्नति त्यो लागि प्रतीक्षा गरिएको छ, वा तिनीहरूले भन्न रूपमा यो यहाँ हुन,»आलोचना»को लागि उनको व्यवहार, हामी भन्न हुनेछ अनुशासित. निस्सन्देह, यदि तपाईं दुई विवाह, कुराहरू सजिलो प्राप्त हुनेछ. तर तपाईं के सम्म, लागि तयार प्राप्त को एक गुच्छा कार्यालय काम-सम्बन्धित समस्या छ । त्यसैले, खण्डित हुन । सबै पछि यो, छ कुनै को आफ्नो व्यापार छ । सही.
यहाँ अर्को कुनै
तपाईं गर्न सक्छन् भर्ना को एक वर्ग वा हेर्न को लागि अभिभावक । तपाईं मा भर्ना वर्ग त्यसपछि तपाईं हुनेछ पछि शिक्षकहरू, जो महिला छन् । छ त्यहाँ छन्, अधिक विदेशी विद्यार्थीहरूको भन्दा शिक्षकहरू । तर राखने एक अभिभावक र यो भन्दा सस्ता छ सबैभन्दा भाषा पाठ्यक्रम. अब यहाँ एउटा अनौठो एक । चीन एक शक को बिना छ, संग एक देश धनी र लामो सांस्कृतिक परम्परा र तपाईं एक लामो बाटो आएको हुन यहाँ जे कारण लागि. त्यसैले, किन मार्न छैन एक पत्थर दुई चरा — कुरा सिक्न र पाउन आफ्नो सपना को महिला छ । उदाहरणका लागि, तपाईं लिन सक्छ एक चिया समारोह वर्ग छ । तपाईं मात्र हुनेछ विदेशीले त्यहाँ, र सबै विद्यार्थीहरूको हुनेछ लगभग सबै महिला । त्यसैले, तपाईं रोशनी मा सबै समय । तपाईं बारेमा चिन्तित छन् भने भाषा बाधा. यो केवल तपाईं अधिक आकर्षक बनाउन. यो, भद्दा र विदेशीले आफ्नो ठूलो नाक बनाउन प्रयास एक सरल वाक्य छ-अति प्यारा मा हरेक चिनियाँ महिला गरेको आँखा । सबै पछि, कि छ, तिनीहरूले कसरी हेर्न हामीलाई मा जनरल । छैनन् अन्वेषण मा नयाँ संस्कृति माध्यम पुस्तकहरू, तपाईं चाहनुहुन्छ सक्छ फैलाउन आफ्नो संस्कृति । किन छैन अंग्रेजी सिकाउन. यी प्रकार जब सबै मा साँझ छ, र छन् भने तपाईं देखि आउँदै अंग्रेजी बोल्ने देशहरुमा, विशेष गरी अमेरिकी र बेलायत, तपाईं प्राप्त हुनेछ एक काम कुनै समय मा संग एक राम्रो खल्ती पैसा र एक प्रोफेसर शीर्षक, जो सधैं काम गर्दछ संग एशियाली बालिका । म तपाईं देखाउने छौँ कसरी प्रयोग गर्न यी चुम्बकीय सन्देश बारी एक महिला र उनको एउटा मिति मा बाहिर संग बस तीन पदहरू. कसरी पम्प उनको जिज्ञासा को पूर्ण, षड्यन्त्र, र इच्छा सम्म त्यो उठयो उनको फोन र मा एक सन्देश. (चाहे त्यो गर्न चाहन्थे वा छैन) र अजीब रूपमा यो आवाज हुनेछ, तपाईं कसरी देखाउन प्रयोग गर्न एक फारम को»यौन स्थापना गर्न»कारखाना»कामुक»को विचार तपाईं मा उनको मन र उनको तपाईं भरोसा सोचिरहेका तपाईं, तपाईं, र पनि नितान्त तपाईं को लागि प्रतीक्षा, आफ्नो अर्को सन्देश सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यी पदहरू चाँडै प्राप्त कि बारी मा सेक्स र सम्बन्ध मा पढ्न यहाँ: म छु बस हालै एक धेरै विशेष साइट भनेर म विचार को एक धेरै तपाईं मान्छे हुनेछ मा साँच्चै चासो छ । यो एक आकर्षण, प्रलोभन र डेटिङ पुस्तिका — मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, म सुरुमा लाग्यो के तपाईं शायद सोच: हामी सुने छु यो सबै पहिले सही । खैर, छैन ठीक छ । यो भनिन्छ मान्छे हुन्छ केटी र, विशिष्ट, द्वारा लेखिएको छ भनिन्छ एक महिला टेलर. मलाई लाग्छ कि सही छ कारण यो यस्तो एक राम्रो पुस्तक (भोल्युमहरू, देखि, मध्यवर्ती उन्नत). यो महिला, सबै भन्दा विपरीत, वास्तवमा थाह सबै फोहोर चाल बालिका खेल मा मान्छे र छैन डर पोख्नु सिमी हामीलाई मानिसहरू । त्यो जान्छ यो माध्यम चरण द्वारा चरण — कसरी आफैलाई तयार गर्न, कसरी र कहाँ पाउन महिला, सबै भन्दा राम्रो तरिका तिनीहरूलाई दृष्टिकोण र प्राप्त कुरा पुरा नौ गज. ओह, म लगभग भूल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो: त्यो वर्णन विशिष्ट तरिकामा ‘नजिक’ मा एक केटी छ । यसको अर्थ या त प्राप्त उनको नम्बर, उनको प्राप्त गर्न को लागि सोध्नु को आफ्नो नम्बर, चुम्बन गर्न कसरी एक केटी र संग भेट्न उनको अर्को दिन र एक पुरा धेरै अधिक. म चाहन्छु तपाईं बताउन बारेमा थप कर्तुतहरू र प्रविधी हो कि यो पुस्तिका तर शायद उल्लेख केही अन्य विवरण सट्टा. यो पुस्तिका उपलब्ध छ देखि मान्छे हुन्छ केटी र तुरन्त डाउनलोड. म व्यक्तिगत प्रतीक्षा गर्न सकेन पढाइ सुरु र प्रयोग सामाग्री यति खुसी थियो पाउन प्रत्येक मात्रा को पुस्तिका उपलब्ध अलग डाउनलोड लागि. सबै सबै मा, अत्यधिक सिफारिश पढाइ लागि सबै मान्छे, कि, मलाई जस्तै थिए संग खुवाउनुभयो डेटिङ दृश्य र बस गर्न चाहन्थे थाह राम्रो सामान — कसरी आकर्षित गर्न र आकर्षित तातो बालिका । यहाँ क्लिक अझ बढी पढ्नुहोस् गर्न सबै मा सबै, अत्यधिक सिफारिश पढाइ लागि सबै मान्छे, कि, मलाई जस्तै थिए संग खुवाउनुभयो डेटिङ दृश्य र बस गर्न चाहन्थे थाह राम्रो सामान — कसरी आकर्षित गर्न र आकर्षित तातो बालिका । भित्र जानकारी तपाईं संग एक जबकि मा एक पटक. यो अगाडी देख छ । ठूलो छ । बस तल फारम भर्न. भरोसा मेरो नयाँ चिनियाँ पत्नी । कृपया तपाईँको इमेल अब. सजग हुन कि हाम्रो पुष्टि ई-मेल गरिएको हुन सक्छ राखिएको मा आफ्नो स्पैम बक्स छ ।
← सर्वोत्तम तरिकामा पूरा गर्न रूसी बालिका विवाहको लागि